Ra’iisul wasaare Kheyre oo lagu wargeliyay in si deg-deg ah uu ku hor-yimaado baarlamaanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo lagu wargeliyay in si deg-deg ah uu ku hor-yimaado baarlamaanka
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wargeliyay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku hor-yimaado baarlamaanka federaalka Soomaaliya, si wax looga weydiiyo xiisadda ka dhalatay qorshaha dib u dhiska ciidamada dalka Soomaaliyeed.
Guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa mooshin uu shalay u gudbiyey baarlamaanka Soomaaliya waxay ku dhaliileen qorshaha ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka, kaas oo ah mid lagu dhisaayo 18,000 askari oo min 3-kun uga imaanaya maamul goboleedyada dalka.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa laga doonaayaa in markii uu hor-yimaado guddiga difaaca baarlamaanka iyo guddoonka inuu uga warbixiyo qorshaha muranka badan dhaliyay oo ay dowladda federaalka qorsheeynayso inay la tagto shirka dhawaan ka furmi doonno magaalada London ee dalka UK.
Guddiga difaaca baarlamaanka iyo guddoonka ayaa markii ay kulanka la yeeshaan ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo wasiirka gaashaandhigga C/rashiid C/laahi, waxay natiijada kulankaasi kasoo baxda la wadaagi doonaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa durbadiiba qiyaano Qaran ku tilmaamay qorshaha dib u dhiska ciidamada dalka oo ay wadaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka.
Xildhibaanadaasi ayaa waxay dalbadeen in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu sidoo kale hor-yimaado baarlamanka, si isagane arrinkaasi wax looga weydiiyo.